Kitra vehivavy – «Division elite»: mitarika ny Askam Itasy | NewsMada
Kitra vehivavy – «Division elite»: mitarika ny Askam Itasy
Niditra tamin’ny andro fahadimy, omaly alarobia ny fifaninanam-pirenena, sokajy vehivavy ho an’ny baolina kitra. Fihaonana, notontosaina teny amin’ny kianja Carion Manjakandriana. Mitarika indray ny Askam Itasy, rehefa nandresy ny Asot Analamanga, tamin’ny alalan’ny fandakana ny «tirs au but», 4 no ho 3. Nisaraka ady sahala, 1 sy 1 ny roa tonta tao anatin’ny fe-potoana ara-dalàna.
Nomontsanin’ny AC Sab-Nam, tamin’ny isa mavesatra 8 no ho 0 kosa ny AS Comato Atsimo Andrefana. Tsy niady mihitsy ny fihaonana satria toy ny nanao fanazarantena ny tovovavin’i Namehana. Nanantombo tamin’ny lafiny rehetra ny AC Sab-Nam. Ankoatra izay, resin’ny Mifa Analamanga, tamin’ny isa tery, 2 no ho 1 ny Som Boeny ary 3 no ho 1 nandavoan’ny Ascuf Matsiatra Ambony, ny Prescoi Vakinankaratra.
Hitohy, rahampitso zoma ny andro fahenina ka Som hifanandrina amin’ny AS Comato. Prescoi, hanohitra ny Mifa. Askam kosa hifampitana amin’ny Ascuf ary adin’ny samy Analamanga izay tena andrasan’ny rehetra ny fihaonana farany, hifandonan’ny Asot sy ny AC Sab-Nam.